Marcelo oo ka warbixiyay sababtii uu iskaga diiday dalab kaga yimid Juventus, si uu markale ula midoobo Ronaldo – Gool FM
(Madrid) 10 Agoosto 2019. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Marcelo ayaa qirtay inuu diiday u dhaqaaqista naadiga Juventus xagaagii hore, si uu ula midoobo xiddiga ay saaxiibada dhow ku ahaayeen Los Blancos ee Cristiano Ronaldo.
Marcelo ayaa ku tilmaamay sababta uu ku diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Juventus inay tahay jaceyl uu u qabo naadiga Real Madrid iyo inuusan dooneynin inuu ka tago garoonka Santiago Bernabéu.
Marcelo ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Real Madrid xagaagii 2018, iyadoo ay arrintan socotay xilli ciyaareedkii hore oo dhan, laakiin ciyaaryahanka ayaa diiday dhamaan dalabyadii kaga yimid kooxaha Juventus iyo Inter Milan wuxuuna go’aansaday inuu kusii nagaado Santiago Bernabeu.
Xiddiga reer Brazil ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu ku sheegay:
“Xiriirro badan ayaan ka helay kooxaha Talyaaniga, laakiin waxa la sheegay kaliya waxay ahaayeen wararka xanta ah ee wargeysyada”.
“Waxaan had iyo jeer dareensanahay inay jiraan wax igu xiriirinaya Real Madrid. runtii waxay tahay inaan jeclahay Real Madrid. Waa gurigeyga iyo kooxda ugu fiican adduunka, ma jiraan wax kale ee lala bar-bardhigi karo Real isboortiga adduunka oo dhan”.
“Marka Real Madrid aysan guuleysan, waxay u muuqataa inay dunida oo dhan dib u dhacayso, kooxdan waxay na siisay wax ka badan kubadda cagta, hada waxaan heysanaa dhalinyaro badan iyo waaya aragnimo, waxaan markale soo laaban doonaa anaga oo awood badan”.
“Ku soo laabashada Neymar Jr ee Barcelona uma sahlanaan doonto Valverde” – Ancelotti